Nin Tooreey la dhax galay Istuudiyaha Idaacad caan ah iyo dhaawac soo gaaray Wariye.. | Xaqiiqonews
Nin Tooreey la dhax galay Istuudiyaha Idaacad caan ah iyo dhaawac soo gaaray Wariye..
Nin aan wax badan aan laga aqoonin ayaa jiiray istuudiyaha idaacad caan ah oo ku taala magaalada Mosco ee dalka ruushiya.
ka dib markii uu xoog ku galay gudaha idcaada “‘Echo Moscow” aya waxaa uu tooreey duray wariye”Tatiana Filghnauer ” oo waqtigaasi si toos ah u tabineysay warka idaacadda.
Maamulka idaacada”‘Echo Moscow” ayaa sheegay in wariyaha waxyeelada soo gaartay hadda lagu dabiibaayo Hospital iyadoo xalaadeeduna aysan fiicneen balse waxa ay sheegeen in aysan jirin wax walwal ah oo laga qabo noolasheeda.
ilo ku dhaw dhaw saraakiisha amniga ruushka ayaa sheegay in su,aalo la weydiinaayo ninka falka geystay waxaana xogaha hordhaca ah ay faa,ideynayaan in falkani uu ahaa mid shaqsi ahaaneed mana jirto faafaahin intaasi ka baxsan oo ay bixiyeen ragga amniga.
gudiga baaritaanka ee ruushka ayaa baahiyey in ninka falka geystay uu wato dhalashada Isra,il iyo tan ruushka waxaana ay ku sheegeen magaciisa Boris Grits oo 48-sano jir ahaa.
Wasaaradda arimaha dibadda ruushka ayaa horay u sheegtay in uu weerarka fuliyey nin ajnabi ah mana faafaahin wax intaasi ka baxsan.